गर वा मरको अवस्थामा काठमाडौं र चितवन ! | Hamro Khelkud
गर वा मरको अवस्थामा काठमाडौं र चितवन !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – तेस्रो संस्करणको टीभीएस एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) मा आज दुई खेल हुँदै छन् । दुई खेल मध्य पोखरा राइनोज र भैरहवा ग्ल्याडीयटर्सलाई आजको खेलमा खासै दबाब हुने छैन ।
चितवन टाइगर्स र काठमाडौं किंग्स इलाभनेलाई आजको खेल गर वा मर सरह हुने छ । पहिलो खेलमा भैरहवा ग्ल्याडीयटर्ससँग काठमाडौं किग्स इलाभेन खेल्ने छ । खेल ९ बजेबाट सुरु हुने छ । भैरहवा लगातार तीन खेलमा जित निकाल्दै प्ले अफमा पुगिसकेको छ । शीर्षस्थानमा रहेर प्ले अफमा पुग्नको लागि भैरहवालाई आजको खेल जित्नु पर्ने हुन्छ । भारतीय ब्याट्सम्यान रविइन्दर सिंह, युएईका तीब्र गतिका बलर मोहम्मद नविद, नेदरल्यान्डका रायन टेन डेस्काटे भैरहवाका मुख्य हतियार साथै जारी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्ने खेलाडी हुन् ।
यता ३ खेलमा दुईमा जित र १ मा हार ब्योहोरेको काठमाडौं प्ले फमा एक खेल अगावै आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न आजको खेलमा जित निकाल्न चाहान्छ । पराजित भए विराटनगरसँगको खेल निर्णायक हुने छ । पहिलो खेलमा चितवनलाई ६ विकेटले पराजित गरेको काठमाडौं दोस्रो खेलमा ललितपुरसँग १० विकेटको फराकिलो हार पुग्यो । तेस्रो खेलमा पोखरालाई ५ विकेटले पराजित गर्दै अघिल्लो चरण बलियो बनाएको हो । यूएईका कप्तान रोहन मुस्तफा, आयरल्यान्डका अलराउण्डर केभिन ओ ब्राइन, भारतीय प्रदीप साहु र आनन्द काठमाडौंका मुख्य खेलाडी हुन् । सोमपाल घाईते भएको कारण कप्तानी रोहन मुस्ताफाले गर्ने छन् ।
त्यस्तै दोस्रो खेलमा चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोजबीचको खेल हुने छ । खेल एक बजेपछि सुरु हुने छ । आजको खेलमा जित्न सके साथै काठमाडौं र विराटनगरको नतिजा आफु अनुकुल आउन सके नेट रनरेटमा चितवनको भाग्य चम्किन सक्छ । चितवन पराजित भए उता विराटनगर र काठमाडौं सोझै प्ले अफमा पुग्ने छन् । पहिलो खेलमा ललितपुसँग ११ रनले पराजित भएको चितवन दोस्रो खेलमा काठमाडौंसँग ६ विकेट र भैरहवासँग १२ रनले पराजित भएको थियो ।
चौथो खेलमा शुक्रबार विराटनगरलाई ५ रनले हराउँदै चितवनले प्ले अफको झिनो अंक गणितीय आसा कायमै राखेको हो । पोखरामाथि फराकिलो जित निकाल्न सके र उता काठमाडौंले विराटनगरलाई फराकिलो रनले हराउन सके चितवन प्ले अफमा पुग्न सक्छ । यहि आसाका साथ चितवन मैदान प्रवेश गर्ने छ । इंग्ल्यान्डका जोन सिम्पसन, जर्ज स्कट र आयरल्यान्डका ओपनर पाउल स्टरलिङ जारी प्रतियोगितमा चितवनबाट उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्ने खेलाडी हुन् । यी खेलाडीको प्रर्दशननै चितवनको हार र जितको निर्धारण हुने छ ।
यता लगातार ४ खेलमा जित बिहीन पोखराको लागि आजको खेल प्रतिष्ठाको लडाइ मात्र हुने छ । दक्षिण अफ्रिकी खेलाडी रिचार्ड लेभी, स्कटल्यान्डका काइल कोट्जर र इंग्ल्यान्डका पाउल कोग्लिनले हरेक खेलमा राम्रो प्रर्दशन गरि रहेका छन् । तर अन्य खेलाडी चन्दा नसक्दा पोखरा प्ले अफको यात्रा तय गर्न सकेन । पोखरा पहिलो खेलमा भैरहवासँग ६, विराटनगरसँग सुपर ओभरमा, ललितपुरसँग ८ र काठमाडौंसँग ५ विकेटले पराजित हुदैं समुह चरणबाटै बाहिरीने पहिलो टिम बनि सकेको छ । स्कटल्यान्डका कप्तान काइल कोट्जर, दक्षिण अफ्रीकाका ओपनर रिचार्ड लेभी र इंग्ल्यान्डका पाउल कोग्लिन पोखराका मुख्य हतियार हुन् ।